नेपाली पाठकहरुमा समर्पित
Nepali Book Reviews by people like you.
Brows the books by genre
Discover, Read and Review
Niel rated it
विवाहित पाठकहरुले यो किताब बाहिर पनि संसार छ भन्ने नभुल्नु
Disclaimer 1 - यो किताब पेटमा राखि सुतेर नपढ्नु । पढ्नै परे शरीर नथिच्ने गरी पढ्नु अन्यथा दुष्परिणामको लागि तयार रहनु । Disclaimer2- विशेषतः विवाहित पाठकहरुले यो किताब बाहिर पनि संसार छ भन्ने नभुल्नु । भुल्ने स्थिति देखिए श्रीमान् वा श्रीमतिमाथि नजर दौडाउनु अन्यथा दुष्परिणामको लागि तयार रहनु । पहिलो कथामा नगरकोटीले उनको आफ्नो लेखन शैलीमाथि जसरि भद्र कटाक्ष गरेका छन् त्यसरी अन्य कसैले शायदै गर्लान् । उनको लेखनको वा लेखन शैलीको खण्डन् गर्नुपर्ने आवश्यकता भएमा उनकै पहिलो कथाबाट धेरै पाठ सिक्न सकिन्छ । अलजाइमरर्सग्रस्त लेखकको कथा सँगै नगरकोटीले गरेको शुरुवात ७७७ पृष्ठको पुस्तकमा पाठकको ध्यान तानेर राख्न लायक छ । छिन्द्रिङ डेली लाईफ छिन्द्रिङ, गायब, गोल्ड फिस, मानसिक आश्रम, मेन्टाज & सिनोप्सिस जस्ता कथाहरुले पुस्तकको पूर्वार्धमा तानेर राख्छन् । पोस्टकार्ड स्टोरिज श्रृङ्खला छोटा भईकन उत्कृष्ट छन् । लघुकथा भन्दा पनि छोटा कथाहरु पोस्टकार्ड स्टोरिज अन्तर्गत समेटिएका छन् । पोस्टकार्ड पठाउँदाको ढाँचामा यी कथाहरु बुनिएका छन् । ग्रे स्टोरिज नगरकोटिको पुराना शैलिका कथाहरु छन् । शैलि पुरानो भएतापनि कथाहरु बेजोड छन् । तर यहाँ आईपुग्दा मैले यो महसुस गरें Nagarkoti has really grown over time asastory teller. ग्रे स्टोरिज अन्तर्गतको फ्याक्ट्री कथा(पेज नं. ३८१)मा बाबर्चीले कथाको म (पुरुष Narrator) लाई " किन एक्लै आएकी ? लोग्नेलाई पनि फ्याक्ट्री घुमाउन ल्याएकी भए हुन्थ्यो नि ! ....... " बाट सम्बोधन शुरु गरी अर्को हरफ सम्म महिलालाई झैँ सम्बोधन गरेकोले कथा पढ्दा अन्योल भई रह्यो । स्क्रिन प्ले स्टोरिज स्क्रिन प्ले कै शैलिमा लेखिएका २ कथाहरु छन् । ट्रान्सक्रिएटेड स्टोरिजमा नगरकोटीले कथानक शैलीमा विश्वसाहित्यको स्वाद दिएका छन् । ट्रान्सक्रिएटेड स्टोरिजका लागी नगरकोटीलाई धन्यवाद । अन्तिम टाईपोग्राफिक स्टोरी 'खग्रास'मा टाईपोग्राफिक प्रयोग सहित कथा बुनिएको छ । प्रयोग गज्जब छ । पढ्दा समेत आनन्द लाग्ने । तर यो प्रयोग नगरेकै भए पनि कथाको ओज नघट्ने मेरो व्यक्तिगत ठम्याई हो । ल्याम्प पोष्ट र शनैः शनैः शब्द अलि बढि नै प्रयोग भएको भेटें । किताब छ ? पढ्नुस् । छैन ? खोजेर पढ्नुस् । मलाई यो प्रतिक्रिया लेख्दै गर्दा उठान गर्न डर लागेको विषय हो नगर–कोटीको साहित्य । नगरकोटीको साहित्य आलोचित हुँदा उनलाई लाग्ने आरोपहरुमा अङ्ग्रेजी र हिन्दीको आवश्यकता भन्दा बढि प्रयोग, यौन तथा यौनिकताको अनावश्यक व्याख्या, गैर कथा वा उपन्यासलाई कथा वा उपन्यास भनिने गरेको, केही निश्चित विम्बहरुको झर्कोलाग्दो निरन्तर प्रयोग आदी(बाँकि नसमेटिएका विषय मनमनै सम्झिएर मःम भने भयो) । कल्पग्रन्थ पनि ती विषयमा अछुतो छैन । तर त्यति हुँदा हुँदै पनि नगरकोटीको साहित्य नगर–कोटीको साहित्य हो या गर–कोटीको साहित्य हो ? नयाँ पुस्ताका लेखकले आफ्ना लेखनमा प्रयोग गर्न सिक्ने या डराउने ? J.R.R. Tolkien को The Lord of the Rings (Series का पुस्तकहरु), G.R.R. Martin को Song of Ice & Fire (Series का पुस्तकहरु) र नेपाली भाषमा सन्जिव उप्रेतिको 'हंस'मा समेत अस्तित्वमा हुँदै नभएको भाषा प्रयोग गरिएको छ । त्यसले भाषाको मानमर्दन भयो भनेर विरोध गर्ने नगर्ने ? प्रयोगहरुको प्रयोगमा कल्प–ग्रन्थ कोषेढुङ्गा हुने क्षमता राख्छ । हुन्छ या हुन्न त्यो भविष्यको गर्भमा छ । बाँकि रह्यो Pre-order को कुरा, कल्पग्रन्थ मैले Pre-order गरेको पहिलो पुस्तक होईन र अन्तिम पनि हुनेछैन । व्याकरणमा भएका त्रूटिहरुका लागि माफि माग्छु ।
सामाजिक, काल्पनिक तथा थ्रीलर रमिते
रमिते उपन्यास नाईट ब्याण्डका संस्थापक सदस्य जेसन कुँवरको रमिते नामक् Multimedia प्रोजेक्टको एक हिस्सा हो। उहाँको गाऊमा उब्जनी अलि कम हुन थालेपछी, दशपर्मको लागि हिडेको बेलामा खिले र उसका साथीहरुले भोगेका विभिन्न कथा तथा घटनामा यो किताब आधारित छ। किताबमा समाज, ईतिहास, जादु तथा काल्पनिक गाऊहरु छन् र हरेक पात्रको आ आफ्नै कथाहरु पनि समाबिस्ट छ। एउटै पात्रको पनि बहुआयामिक पक्ष पनि यस किताबमा पाईन्छ। पढ्ने क्रममा कतै कतै किताबमा रहेको गहिरो तथा अँध्यारो पाटो पनि बाहिर आऊदछ। सामाजिक, काल्पनिक तथा थ्रीलर पक्षलाई यस किताबले निक्कै नै रामोसँग प्रस्तुत गरेको छ। किताब पढ्नने क्रममा बिच बिचमा रहेको गितहरुले अझ कथामा रौनक थप्दछ। किताब पढ्दै गर्दा Ramite- Music vol.1 सुन्नुभएमा अझ किताब तथा गीतको सार स्पष्ट हुन्छ।
मनै फिरफिर बनायो
लामोनै भए पनि नमिठो चाहिँ कहिलै पनि भएन । कथावस्तुले पानाहरु पल्टाको पल्टाई गर्न मन लाग्यो । गाँउघरको विषय लिएर लेखकले निकैनै मिठो तरिकाले प्रस्तुत गरेका छन् । गाउँको बाल्यकालको दिनहरु पनि याद आए ।
Madan Puraskar Nomination 2077 [मदन पुरस्कार मनोनयन २०७७]
by G.S. Poudel